Omar Sayid Abdilahi: June 2015
Fly Dubai Touch down Hargiesa - EGAL- Airport
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 1:26 PM No comments:
Xafladii dhamaystirka Madaarka Caasimada
28 May 2015, waxa si rasmi ah xadhiga looga jaray afar mashruuc oo isugu jira kuwii dawlada kuwait ay noogu deeqday iyo kuwo Jamhuuriyada Somaliland Maalgalisay.
Afartaas mashruuc waxay kala ahaayeen sidan hoos ku qoran.
1: Dhamaystirka Dhabada diyaaraha oo lagu kordhiyay 1250 M
2: Xayndaab dhan 13 KM square
3: Laydhkii garoonku habeenki ku shaqaynayay
4: Xarun dab damis iyo kayd biyo oo casri ah.
Afartan mashruuc waxay sahlayaan in madaarku noqdo category 9 halka uu markii hore shan sano ka hor ahaa category 2.
Guud ahaan xafladu waxay ahayd mid aad iyo aad dadku uga helay, gaar ahaan waxa lagu soo bandhigay visionka cusub ee wasaarada oo ah terminal casri ah ee hoos ka muuqda oo laga hir galin doono madaarka caasimada.
Waxay ahayd xaflad ay ka soo qayb galeen marti sharaf dhan 1000 qof oo madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland hogaaminayo, kana mid ahaayeen diblamaasiyiin culus iyo dadk kale oo magac way n ku leh aduunka sida safiirka ingiriiska u qaabilasan Somaliland iyo somalia Mr Wigan.
xaflada aniga ayaa xidhiidhinayay.
Posted by Omar Sayid Abdilahi at 2:35 AM No comments: